Politika maloto, voretra… | NewsMada
Politika maloto, voretra…
Voretra, tena voretra loatra ny mponina eny ambany tanàna. Asa, mahery loatra, mety hanafintohina ny sasany angamba izany, fa akory atao. Izay mihitsy ny mahalaza azy. Inona koa anefa no iholankolahana amin’izany e. Rehefa izay dia izay. Izay mbola tsy resy lahatra amin’izany, mandehana eo Ampefiloha, jereo sy diniho eo amin’ny ilany havia sy havanan’ny tetezana, manaraka iny lakandranon’Andriantany iny. Mahatsiravina, mampihivingivina ny loto sy fako ivangongoan’ny tavoahangy sy harona plastika. Ny fofona aterak’izany, aoka fotsiny, maimbo tena maimbo. Mahatsiravina, maharikoriko !
“Ny fahantrana no mahatonga izany e”, “Katsaka, tsaramaso, voanjobory…”. Izay fahasahiranana izay hatrany ny hanilihana sy hatao hirahira. Aiza moa no tsy hanararaotra ny mpanao politika. Te hisolelaka, te hampiseho fa mitsinjo ny vahoaka madinika, hono. Te hoderaina koa fa manao sy mahavita e. Inona anefa, vahaolana miserana sy mandalo ihany. Teo alohaloha teo aza, vao nomena sy nizarana trano lay indray ireo mponina manaraka iny lakandranon’Andriantany iny. Toy ny milaza hoe, mifotetaha eo, miareta eo fa tsy misy hisehosehoanay.
Lalaovin’ny mpanao politika loatra ny vahoaka. Indrindra, ny vahoaka madinika eny ambany tanàna. Ireto farany koa amin’izay, zara aza misy vary iray mahandro, kabaro indray manokona, lamba tsy hateza akory hifarombahana, hifandritahana… hifamonoana mihitsy aza. Toy ireny nitranga teny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena, eny Mahamasina, farany teo ireny. Mbola hisy farany avokoa anefa ny zava-drehetra. Hohadinina amin’izay nahavanona azy izany, indray andro any. Politika maloto, voretra !